चलचित्र निर्माता संघका अधिकांश माग पूरा गर्न चलचित्र विकास बोर्ड तयार,के के थिए त मागहरु ? «
चलचित्र निर्माता संघका अधिकांश माग पूरा गर्न चलचित्र विकास बोर्ड तयार,के के थिए त मागहरु ?
प्रकाशित मिति :6October, 2020 3:09 pm
चलचित्र निर्माता संघका अधिकांश माग पूरा गर्न चलचित्र विकास बोर्ड तयार देखिएको छ । को’रोनाका कारण थ’ला परेको चलचित्र उद्योगलाई चलायमान बनाउन निर्माता संघ र चलचित्र संघले राखेका अधिकांश माग पूरा गर्न बोर्ड तयार देखिएको हो । सिनेमा हल खुलेपछि प्रदर्शनमा आउने चलचित्रको प्रचार खर्च बोर्डले व्यवहोर्ने, एक प्रतिशतको प्रोजेक्ट बिमा गरिदिने, छायांकनमा जाने चलचित्रकर्मीको पीसीआर परीक्षण गरिदिनेलगायत माग बोर्डले गरिदिने भएको छ ।
“जसरी हुन्छ चलचित्र क्षेत्रलाई पूरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्छ भन्‍ने हाम्रो उद्देश्य हो । यसका लागि बोर्ड निर्माता तथा हलहरुलाई सहयोग गर्न तयार छ,” चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य नरेन्द्र महर्जन भन्छन्, “प्रचार खर्च कति गर्ने भन्‍ने निर्माताको चाहना हो । तर न्यूनतम सहयोग बोर्डले गर्छ । इनकोडिङ र केडीएम बोर्डले तिरिदिन्छ । प्रचारका लागि नेपाल टेलिभिजनसँग सहकार्य गराइदिएका छौं । केही प्राइभेट सञ्चारमाध्यमसँग पनि ठूलो छुटका विज्ञापन गर्ने वातावरण तयार गरिदिएका छौं ।” निर्माता संघले चोक, बसपार्क तथा ठूला सहरमा सिनेमाको होर्डिङ बोर्ड सरकारले राखिदिनुपर्ने, पोस्टर, पम्प्लेटको पैसा सरकारले बेहोर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
बोर्डले आफ्नो दायरामा बसेर गर्न मिल्ने र सक्ने जति निर्माता संघ र चलचित्र संघका अधिकांश माग पूरा गर्न बोर्ड तयार महर्जन बताउँछन् । सिनेमाको २० प्रतिशत बजेट निर्मातालाई दिनु पर्ने निर्माता संघको माग भने बोर्डले सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै महर्जनले उक्त माग मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको बताए । निर्माता संघले सिनेका हल खुल्नेबित्तिकै रिलिजमा आउने चलचित्रको २० प्रतिशत रकम सरकारले बेहोर्नुपर्ने अन्यथा चलचित्र प्रदर्शन गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । चलचित्र एकपटक रिलिज गरेपछि दर्शक आएनन् भने पुनः अर्कोपटक रिलिज गर्न नमिल्ने भन्दै संघले मेजर रिलिज नै सिनेमा हल भएकाले पूर्ण क्षमतामा हल नखुल्दासम्म सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
सबै पक्ष गरेर लगानीको २१ प्रतिशत सरकारले बेहोरे ७९ लगानी निर्माताले गरेर चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने संघले बताएको छ । संघका अनुसार चलचित्रमा करिब ३० हजारले रोजगारी पाइरहेका छन् ।चलचित्र विकास बोर्डले सदस्य नरेन्द्र महर्जनको संयोजकत्वमा अध्ययन समितिले गठन गरेर तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा राहत तथा सहयोग प्रदान गर्ने तयारी गरेको हो । सिनेमा हल खोल्न सरकारले अनुमति दिएको अवस्थामा पनि सिनेमा हल खुल्छन् कि खुल्दैनन् भन्‍ने अन्योल छ । “काठमाडौंमा कोरोना संक्रमण झन् बढेको छ । सरकारले सकेसम्म काठमाडौं नआउन नागरिकलाई आग्रह गरेको छ,” बोर्डका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “सरकारले सिनेमा हल खोल्न अनुमति दिएको अवस्थामा पनि अवस्था सहज छैन । अ’न्योलको अवस्था कायम नै छ ।” चैत ६ गतेबाट देशभरका करिब २०० सिनेमा हल ब’न्द छन् ।
सत्ताको होल बडी चेक अप *****************
कवि- बलराम तिमल्सिना देशमा सबैभन्दा बिरामी जब सत्ता नै हुन्छ र मुन्टो बटारेर बस्छ जनतासँग